Ikati yase-Highlander ekrwada | Amakati eNoti
I-Highlander yibhola entle enothando yoboya ekwaziyo ukoyisa lonke usapho kwintsuku nje ezimbalwa. Sisilwanyana esithanda ukuba sisazulu sokuqwalaselwa kwaye sinika uthando olukhulu, ke sisiqabane esifanelekileyo kubantu abahlala bodwa okanye abafuna ukuba nobushushu ekhaya.
Nangona luhlobo lwe-hybridi, akufuneki ukhathazeke ngayo nantoni na kuba ingulomfazi ozivumelanisa kakuhle nokuhlala endlwini.
1 Imvelaphi kunye nembali yenkomo
3 Ukuziphatha kwe-Highlander kunye nobuntu
4.4 Uthando kunye nenkampani
5 Ixabisa malini ikati yase nkomo?
6 Iifoto zekati yasezinkomo
Imvelaphi kunye nembali yenkomo
Umlinganiswa wethu ophambili yifeline eyenziwe eUnited States ngo-1995, xa ikati yohlobo Ijika laseMelika wadibana nengqawa. Kusenokwenzeka ukuba inkunkuma yokuqala yamantshontsho yazalwa inomzimba kanina kodwa inesimo sikatata, bathi nje ukuba babemdala bawela kunye nezinye iintlobo zekati zasekhaya ezenziwa ngeCarl ukubenza bazole ngakumbi.
Kwiminyaka elishumi kamva, ngo-2005, i-TICA yabhalisa olu luhlobo kudidi lweNew Preliminary Breeds.
Le kati yifeline enkulu: inkunzi inobunzima obusuka ku-6 ukuya ku-9kg ize inenekazi lisuke ku-4 liye ku-6kg. Inomzimba onezihlunu kwaye omde, ugqunywe luthotho lweenwele ezinokuba zide okanye zifutshane kunye nawuphi na umbala. Intloko inobukhulu obuphakathi, ngamehlo nawo aphakathi kunye nemilo embhoxo. Iindlebe zinkulu kwaye zigobile, ziqhelekile kwiAmerican Curl.
Imilenze ilinganiswe kakuhle nomzimba wonke; abo bangasemva inde kancinci kunangaphambili. Umsila unciphile kwaye umfutshane, ziisentimitha ezintlanu ubude.
Ukuziphatha kwe-Highlander kunye nobuntu
Yifeline, iyathandeka. Ulunge kakhulu, ulungile, uyadlala, unomdla kwaye uyakuthanda ukuchitha ixesha elininzi kangangoko kunokwenzeka nabantu.. Ngaphezu koko, kunokuba nobuhlobo kunye nabantwana kunye nezinye izilwanyana. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba awungekhe unyamezele ukuchitha ixesha wedwa, ke kubalulekile ukuba ube nomntu wakho ecaleni kwakho.
Kufuneka itye inyama (nokuba bomvu okanye luhlaza okwesibhakabhaka), ukuba sisilwanyana esidla inyama. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa kakhulu ukuthintela ukunika ukutya ukutya okutyebileyo, kuba nangona kungabizi kakhulu, ngekhe bakunike zonke izondlo-mzimba ozifuna ngokwenene. Phakathi kweyona nto iluncedo kakhulu zii-Applaws, iOrijen, iAcana, okanye iNyama ePhakamileyo yeNyama phakathi kwabanye.
Ezinye iindlela ezilungileyo zokondla kukutya kweYum, kunye nokutya kweBarf. Okokugqibela ngokungathandabuzekiyo kokona kulungileyo, ukuba nje kuyalandelwa ingcebiso yengcali ekondliweni kwamantshontsho. Kwaye ke, ukuba ayinasondlo, impilo yesilwanyana ingaba sengozini enkulu.
Iinwele: ukuba sithathela ingqalelo ukuba imfutshane, kwaye uyayikhathalela nokuyigcina icocekile, kuya kufuneka uyitshayele yonke imihla.
Amazinyo: ukususela ebuntwaneni kuyacetyiswa ukuba umqhelise ukuxukuxa amazinyo, kuba ngale ndlela ziya kuhlala ixesha elide.
Amehlo: Ukuba ubona ukuba bane-legañas, kuya kufuneka uzisuse nge-gauze.
Iindlebe: ziphonononge amaxesha ngamaxesha, kwaye ukuba ubona ukuba ziqokelela i-wax eninzi, zicoce ngamathontsi athile oxelelwa ngugqirha wezilwanyana.
Impilo yakhe intle, nangona kunjalo Kuya kufuneka umse ukuze ahlolwe xa ubona ukuba ngequbuliso eqala ukutya kancinci kunesiqhelo, enefiva, okanye ukrokrela ukuba akaphilanga. Ukongeza, kuya kufuneka uyithathe ukuze ufumane ugonyo olunyanzelekileyo kunyaka wokuqala wobomi, kunye nemipu yonyaka yokunyusa; I-microchip nayo kufuneka ifakwe.
Uthando kunye nenkampani
Uthando kunye nenkampani Ziyinto ekungafuneki ukuba iphoswe nangomhla. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba ucinge kakuhle ukuba uza kukhathalela ikati yase-Highlander, kuba ukuba ithe yavela kamva ukuba ayifani, isilwanyana siya kuba nelona xesha libi.
Ukuba uzimisele kwaye ukulungele ukumkhathalela, siqinisekile ukuba kungekudala uza kumenza abe ngumhlobo wakho omtsha onemilenze emine.
Ixabisa malini ikati yase nkomo?
Ukuba uphupha ngokuhlala nekati entle yaseHighlander, fumana indawo ekubonakala ukuba inzima kwaye ikunike ukuzithemba. Sukungxama kakhulu. Xa uyifumene, chitha ixesha kunye namantshontsho akho, buza imibuzo enokuvela, kwaye nje ukuba uyicacise, thenga injana oyise intliziyo yakho. Ixabiso li I-800 euros.
Olunye ukhetho kukuyifumana kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, apho ixabiso liya kuba sezantsi. Kodwa kufuneka uyazi ukuba ukuyithenga kukho okungalunganga, kuba umzekelo awuyi kukwazi ukudibana nabazali bekati okanye nantoni na malunga nempilo yayo.
Iifoto zekati yasezinkomo
Ukugqiba, siza kukushiya nothotho lweefoto zale kati intle:
Umfanekiso - Petpaw.com.au
Umfanekiso - Omlet.co.uk
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati yase-Highlander enomdla
Kubiza malini ukuhamba nekati ngenqwelomoya
Kufuneka wenze ntoni xa ikati yam ishushu